FBC - Sudaan Kibbaa nyaata akka meeshaa waraanaatti fayyadamteetti kan jedhuun qeeqamuushee hin-fudhanne
Sudaan Kibbaa nyaata akka meeshaa waraanaatti fayyadamteetti kan jedhuun qeeqamuushee hin-fudhanne
Finfinnee, Sadaasa 5, 2010 (FBC) Sudaan Kibbaa nyaata akka meeshaa waraanaatti fayyadamteetti kan jedhuun himatamuushee hin-fudhanne.
Biyyattiin naannolee Kaaba Waw fi Baahir El Gaazaalitti ta’e jettee namoonni kumaatamatti lakka’aman akka beela’an gochuun nyaata akka meeshaa waraanaatti fayyadamteetti kan jedhuuf deebii mormii laatteetti..
Dubbi-himaan Pireezdaant Kiir Ateenii Week Ateenii akka himanitti Mana-maree Nageenyaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Koree qoqqobbii Sudaan Kibbaaf gabaasi qaqqabe bu’uura kan hin-qabnedha.
Gabaasi kun carraaqii mootummaan biyyattii naannolee kanneenitti deggarsi namoomaa saffisaan akka qaqqabuuf taasisaa jirtu kan hin-bu’uureffanne ta’uu dubbi-himaan kun himaniiru.
Mootummaan Uummattoota Sudaan Kibbaa bulchuu waan barbaaduuf ta’e jedhamee nyaati isaanii dhihaatu akka addaan citu hin-taasifamne jedhaniiru.
Gabaasi Dhaabbata Mootummootaa dhihootti ba’e Kaaba biyyattii naannoo Waawutti gargaarsa namoomaa qaqqaban dhorkuun namoonni hedduu hanqina nyaataaf akka saaxilamanii fi sababa beelaan akka du’an taasifameera kan jedhudha.
Haata’u malee, Pireezdaant Saalvaa Kiir Maayardiit torban darbe humnoonni nageenyaa naannolee walitti-bu’iinsaatti gargaarsi namoomaa akka addaan hin-cinne namoota gargaarsi nyaataa isaan barbaachisu nyaati akka isaan qaqqabu ajajaniiru.
Biyyi akka biyyaatti A.L.A Adoolessa 2011 hundeeffamte kun Pireezdaantiin biyyattii Kiir Itti-aanaa pireezdaantii duraanii Riik Maachaar mootummaa galagalchuu akka barbaadan Mudde 2013 dubbachiuusaaniin wal-qabatee ergasii as walitti bu’iinsaaf saaxilamtee jirti.
Waraanni kun namoonni baay’een biyya dhiisanii akka baqatan sababa ta’eera, akkasumas rakkoo namoomaa (humanitarian) qaamolee hawaasaa caalaa saaxilamoo ta’anii - daa’immanii fi dubartootaaf - biyyattii saaxileera.
Oduuwwan Biroo « Saawdii fi Iiraan olaantummaarratti walfalmaa jiru	Raayyan Ziimbaabuwee Muugaabee to'annaa jala oolche »